एमाले-माओवादी सहमतिमा बूँदा नम्बर ६ बीचैमा बालुवाटारबाट गायब, के थियो त्यसमा? – MySansar
एमाले-माओवादी सहमतिमा बूँदा नम्बर ६ बीचैमा बालुवाटारबाट गायब, के थियो त्यसमा?
Posted on February 20, 2018 by Salokya
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणका लागि भएको सात बूँदे सहमतिबाट एउटा बूँदा बीचैमा गायब भएको छ। गायब भएको बूँदाको सट्टामा अर्को बूँदा थपिएको छ। खासमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीले सात बूँदे सहमतिमा ठीक साढे १० बजे हस्ताक्षर गरेका थिए एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार। राति ठीक १० बजेर ५९ मिनेटमा प्रचण्डको आधिकारिक वेबसाइट र ट्विटरमा यो सहमतिका बूँदाहरु सार्वजनिक भयो। यो विषयमा सहमति हुने भनेर लगभग कुरा भइसकेको होला। त्यसैले शायद् यसको टेक्स्ट पनि प्रचण्डको टिमसित थियो होला। हस्ताक्षर भयो भन्ने बित्तिकै त्यही सहमति होला भन्ठानेर उनीहरुले १० बजेर ५९ मिनेटमा त्यो वेबसाइटमा अपडेट गरिदिए र ट्विट गरिदिए। तर हस्ताक्षर भएको कागजमा भने सात बूँदा त सात बूँदा नै थियो, एउटा बूँदा भने हराएर अर्कै बूँदा त्यसको साटो थपिएको थियो।
यस्तो थियो प्रचण्डको वेबसाइटमा पहिले सार्वजनिक भएको सात बूँदे समझदारी-
काठमाडौं, फागुन ७ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकताको ऐतिहासिक समझदारी भएको छ। नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना र समाजवादको आधार तयार पार्ने महान उद्देश्यसहित गत असौज १७ गतेदेखि शुरु भएको एकता प्रक्रियामा आज समझदारी जुटेको हो। यो बीचमा पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, नेतृत्व, संगठनात्मक एकीकरणको प्रक्रिया लगायतका विषयमा दर्जनौपटक दुबै दलबीच बिभिन्न तह र चरणमा छलफल सम्पन्न भएको थियो। दुबै दलले एकता प्रक्रियामा सहमति निर्माण गर्न दुबै अध्यक्ष रहने पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरेका थिए।
आज बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकल सात बुँदे समझदारी गरेको छ।
यस्तो थियो बालुवाटारमा हस्ताक्षर भएको समझदारी-
तपाईँले देख्नुभयो होला यी दुई वटा समझदारी मध्ये ६ नम्बरको बूँदामा ‘महाधिवेशनसम्म पार्टीको मूल नेतृत्व र केन्द्रीय बैठकहरुको अध्यक्षता दुबै पार्टीका वर्तमान अध्यक्षद्वारा आलोपालो प्रणालीबाट गरिने छ । र सरकारको नेतृत्वमा समेत सोही आलोपालो प्रणाली अपनाइने’ उल्लेख थियो सुरुमा सार्वजनिक हुँदा। हस्ताक्षर भएको समझदारीमा भने ६ नम्बरको बूँदामा ‘प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै समाजिक आर्थिक रुपान्तरण मार्फत् समाजवादका आधार निमार्ण गरिनेछ’ लेखिएको छ।
आलोपालो गर्ने भन्ने कुरा यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको हो। तर चुनावमा स्थिर सरकारको नारा लिएर गएको वाम गठबन्धनले सहमतिमै आलोपालो उल्लेख गर्दा आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने भयले हुनसक्छ लिखित सहमति भएन। तर भद्र सहमति भएको कुरा भने प्रचण्डले बालुवाटारबाट बाहिरिँदा सार्वजनिक गरे। उनले दुवै दलका अध्यक्ष एकता महाधिवेशनसम्म रहने प्रष्टै भएको बताए। पार्टीका बैठकहरुमा पालैपालो अध्यक्षता गर्ने पनि खुलाए। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषयमा भने उनी हाँसे मात्रै। हाँसेर हो भन्ने संकेत गरे। यसअघि चितवनमा भाषण गर्दा उनले आफू ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री बन्ने भनिसकेका थिए।
संविधान बनिसकेपछि माओवादीको सहयोगमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यतिबेला पनि आलोपालोमा भद्र सहमति भएको भनिएको थियो। लिखित नभएकोले केपी ओलीको सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रचण्डले राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए। यसपालि पनि लिखित भएको छैन। भविष्यमा के हुने हो, कुरौँ।
2 thoughts on “एमाले-माओवादी सहमतिमा बूँदा नम्बर ६ बीचैमा बालुवाटारबाट गायब, के थियो त्यसमा?”
इयु पलस रअ अन्डर ब्र्याकेट नेपाली कमाउनिस्ट इजीकल्टू द्रव्यपिशाच प्रविर्ति भन्ने इक्येसन् नबनोस भन्ने शुभकामना…
बाम एकीकरणले देशलाई राम्रो होस्….
बाम इतरकाहरुको पनि होश पसोस्….
अहिले मावोबादी र यमाले मिलेर बनेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने भनियो र उनीहरुको नीतिको निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सबाद लेनिन बाद रहने त् भनियो/ तर के दुवै पार्टी मार्क्सबाद लेनिनबाद अनुसारनै चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी हो? हामीले भोगे देखेको यमालेको मावोबादीको नेता नीति र सरकार लाई ध्यानमा राखेर भन्ने हो भने ई दुवै पार्टीहरु कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै होईन/
यमालेको केहि नेता र केहि नीतिलाई अहिले अलि अलग्ग राखेर भन्ने हो भने मनमोहन मदन भण्डारी पछिको यमाले केहि प्रतिशत मात्रै कम्युनिस्ट र धेरै प्रतिशत आफुलाई कांग्रेस भन्ने भन्दा फरक देखायर कांग्रेस मन नपराउनेको भोट बटुल्ने पार्टी मात्रै भयको देखिन्छ/
अब मावोबादीको बारेमा भन्ने हो इनिहरु मावोबादी पनि होईन कम्युनिस्ट पनि होईन, मात्र जसरि भय पनि, जसको साथ् लियर भय पनि नेपालको राजनीतिमा हावी हुन् खोज्ने जमात मात्रै हो/ इनिहरुले बिद्रोह गर्दा भारत परास्त भयको गिरिजा मुर्दावाद, भारत सिट झुक्नु भन्दा नेपाली नागरिक सिट झुक्ने राजतन्त्र महान रास्त्रवादी भयको भनेको, भारतीय बिस्तारबाद मुर्दाबाद भनेको र परिआयमा नेपाल हेप्ने मिच्ने भारत सिट सुरुङ्ग युद्ध समेत गर्ने भनेको सबै नै महाझुठ नै भयको र इनिहरुले दवाईयको शोसित भयको नेपालीलाई आकर्षित गर्न मागेको ४० बुन्देमागहरु मात्र झुक्याउन र लोभ्याउन मात्रै भयको देखिनै सकेको छ/
मावोबादिहरु साँच्चिकै भारत परस्त नेता र नीतिको बिरोधि भयको इनिहरुले कुनै पनि हालतमा दिल्लीमा त्यो पनि भारतीय भाषामा लेखियको र आफुले मागेको ४० बुन्देमागहरु नसमेटेको सम्झौतामा कदापि सहि गर्ने थियन/गिरिजालाई आफ्नो महा नायक मान्ने थियन/ भारतले उहिले देखि प्रयास गर्दै आयको तर सफल नभयको तराई पसे जत्तिको बिहारिहरुलाई सजिलै नागरिकता दिलायर तराईमा ४०सौ लाख नेपालि नागरिकता तेतिकै दिने कुरामा सहभागी हुनेनै थियन/
मावोबादिले पटक पटक सरकारको नेतृत्व पनि गरे तर कालापानी र १९५० को मुद्दाको उच्चारण समेत नगरेको मात्रै होईन दिल्लीमै पुगेर सन् १९५०को सन्धि खारेज गर्नु पर्छ भन्ने मनमोहनको पार्टी को तरफ बात नेतृत्व गरेको ओलीको नेतृत्वको सरकार प्रति अविस्वासको प्रस्तावक समेत बनेर सन् १९५०को असमान सन्धि लगायत नेपाल मिचिने कयौं सन्धि गरेको पार्टी सिट मिले/ त् यस्तो मावोबादिहरु अहिले किन यमाले सिट मिले; के यो उनीहरु आफुले जनयुद्ध ताका गरेको गरेको गलत कुरा उठाउन नदिन आफ्नो राजनैतिक आकार र ताकत बढाउने र सत्ताको साथ् पाउन मात्रै होईन?
रास्त्रवाद सम्बन्धित नीतिमा चिप्लेको कारणले जहिले पनि सबै भन्दा ठुलो दल बन्न सफल कांग्रेसको आकार त्त् यति सानो भयो भने जनयुद्ध ताका अनेकौं अपराध गरेका, सिविर काण्ड गरेका, जनयुद्ध ताका कब्जा गरेको सम्पति अझै फिर्ता नगरेका, आफु सत्तामा पुकेको बेला पनि भारतले नेपाल मिचेको कुरामा यक सब्द पनि बिरोध नगरेको र अनेकौ टुक्रामा विभाजित भयको मावोबादीको आकार आखाले देख्न सकिने पनि हुने थियो बा थियन?
अहिले यमाले सिट मिलेर चुनावमा लागेकोले मावोबादीको आकार त् बन्यो तर के इनिहरुले यमाले बिरोधि दलहरु सिट मिलेर पनि यमालेको सरकार भत्काउन सक्ने अबस्था देखे फेरी पनि ओलीको हातमा अस्ति जस्तै “अविस्वासको प्रस्ताव” नदेला?